Shisheeyaha Iyo Askarta Dowlada Oo Lagu Weeraray Sh/hoose. – Bogga Calamada.com
Shisheeyaha Iyo Askarta Dowlada Oo Lagu Weeraray Sh/hoose.
August 30, 2017 6:10 pm Views: 99
Ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin waxey saacadihii lasoo dhaafay weerar dhabba gal u dhigeen kolanyo ka tirsan ciidamada Kufaarta Afrikaanta.
Kolanyada Shisheeyaha waxaa weerarkan dhabba galka ah loogu dhigay Tuulada loo yaqaano Jiiro-gaaljecel waxeyna kolanyadan kamiinka loo dhigay kasoo baxeen magaalada Muqdisho waxeyna kusii jeedeen dhanka deegaanka Shalambood.
Kamiinka ayaa ku bilowday qaraxyo culus oo miino ah kuwaasi oo waxyeelo lagu gaarsiiyay gaadiidka gaalada,sidoo kale kamiinkaasi waxaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday tiro ka tirsan ciidamada Kufaarta Afrikaanta.
Dhanka kale ciidamada Shabaabul Mujaahidiin waxey weerar culus ku qaadeen isbaarada maleeshiyaatka dowlada Ridada ay dhigteen xaafada Buulo Fooliye ee degmada Afgooye ee gobalka Shabeelada hoose.
Dadka degmada waxey xaqiijiyeen in dagaalka markii muddo kooban socday maleeshiyaatka dowlada Farmaajo ay isaga carareen goobta isbaarada waxey ciidamada Shabaabul Mujaahidiin gudaha usoo galeen degmada Afgooye iyagoona ku roondeeyay wadooyinka degmadaasi.